Best Mid-Range Smartphones Of 2019 : Great, Affordable Phones | Net Guide
Home Article Best Mid-Range Smartphones Of 2019 : Great, Affordable Phones
Mid-range စမတျဖုနျးလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ budget ဖုနျးနဲ့ high-end ကွားထဲက လူတနျးစားအစုံသုံးနိုငျမယျ့ စမတျဖုနျးလို့ တနျးမွငျကွမှာပါ။ 2019 မှာဆိုရငျ mid-range ဖုနျးတှမှော higher-end features တှေ ထညျ့သှငျးလာကွတာကို တှရေ့မှာပါ။ သငျ့ Mid-Range စမတျဖုနျးကို ရှေးခယျြလိုကျတယျဆိုပမေယျ့ အဲ့ဒီဖုနျးမှာ ထငျမှတျမထားတဲ့ premium features တှကေို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ ဒီနှဈအတှငျး ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Mid-Range ဖုနျးတှကေို သတိထားကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ ကောငျးမှနျတဲ့ ပရိုဆကျဆာ၊ ကွီးမားတဲ့ ဘကျထရီနဲ့ နောကျကြောဘကျမှာ ကငျမရာ2လုံး၊3လုံး ပါဝငျလာတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောတို့အတှကျ high-end ဖုနျးတှဟော အလှမျးဝေးလှနျးလှပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ high-end ဖုနျးတှမှော ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတခြို့ပါဝငျတဲ့ Mid-Range စမတျဖုနျးတှကေို ရှေးခယျြဖို့ ဖွဈလာပါတယျ။ ပွီးတော့ mid-range ဖုနျးသာဆိုတယျ အဲ့ဒီဖုနျးတှမှော flagship-grade fast charging, quad-cameras ကနပွေီးတော့ စြေးနှုနျးနဲ့ အသုံးဝငျမှုအပျေါ အခွခေံပွီး ရှေးခယျြပေးထားတဲ့ 2019 အတှကျ အကောငျးဆုံး Mid-Range စမတျဖုနျးတှအေကွောငျးကို ဒီတဈပတျအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(1). Redmi Note 8 Pro
Redmi Note model တှကေိုမှ ဒီစာရငျးထဲ မထညျ့ထားရငျ အကောငျးဆုံး Mid-Range စမတျဖုနျးဆိုတဲ့ စာရငျးဟာ ပွညျ့စုံသှားမယျ မထငျပါဘူး။ Redmi ရဲ့ Note ဖုနျးတှဟော အလယျအလတျ စမတျဖုနျး ဝယျယူသူတှထေဲ ကွားထဲမှာ အလှနျရပေနျးစားတယျလို့ သတျမှတျရမှာပါ။ ကုမ်ပဏီဘကျက ပွောကွားခကျြအရ Redmi Note 8 စီးရီးဖုနျးတှကေို3လအတှငျး အလုံးရေ 10 သနျးလောကျ ရောငျးနိုငျပွီဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ Redmi Note 8 Pro ကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ သူ့မှာ စတိုငျကတြဲ့ ကိုယျထညျနဲ့ ဂိမျးပိုငျးအတှကျ ပွညျ့စုံတဲ့ ပရိုဆကျဆာတို့ သုံးထားတာကို တှရေ့မှာပါ။ mid-range စမတျဖုနျးတှထေဲမှာ အတျောဟနျခကျြညီမြှတဲ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျရပါလိမျ့မယျ။ သူဟာ 64MP Camera ပါတဲ့ ပထမဆုံးဖုနျးဖွဈပွီး Samsung ရဲ့ ISOCELL Bright GW1 Sensor ဖွဈပွီး Quad-binning Pixel နညျးပညာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ 6.53 လကျမ Full HD+ Display တပျဆငျထားပွီး ဘေးဘောငျတှကေ ပါးလှာပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ ကငျမရာ4လုံးကို ဒေါငျလိုကျ တပျဆငျထားပါတယျ။ 64MP Main, 8MP Ultrawide, 2MP Depth နဲ့ 2MP Macro တှေ ဖွဈပါတယျ။ AI Features နဲ့ Scene Recognition တှပေါတဲ့ 20MP Selfie ကငျမရာကို Notch မှာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီဖုနျးဟာ MediaTekHelio G90T ပါတဲ့ ပထမဆုံးစမတျဖုနျးလညျး ဖွဈလာပါတယျ။ 18W Fast Charging ပါတဲ့ 4500 mAh Battery ထညျ့ထားပါတယျ။ ဂိမျးတှဆေော့တဲ့အခြိနျမှာ Chipset ကို အပူခြိနျလြှော့ခပြေးဖို့ Liquid Cooling Chamber 1 ခု ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ WiFi နဲ့ 4G2ခုစလုံးကို တဈပွိုငျနကျ ခြိတျဆကျနိုငျပါတယျ။
(2). Realme X2
အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ Mid-Range စမတျဖုနျးစာရငျးမှာ Redmi Note model တောငျပါသေးရငျ Realme X2 ကရော ပါလို့မရနိုငျဘူးလား။ ဒီနှဈထဲမှာ ခပျကွမျးကွမျးထှကျနတေဲ့ Realme ကုမ်ပဏီရဲ့ Realme X2 ဖုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ 2019 ထှကျထားတဲ့ ဖုနျးတှထေဲမှာတော့ Realme X2 ဖုနျးဟာ အတျောကောငျးတဲ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျရမှာပါ။ စြေးလညျး သကျသာသလို premium features အနညျးငယျကိုလညျး တှရေ့မှာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျကို Gorilla Glass5နဲ့ ကာကှယျထားပါတယျ။ 64MP အပါအဝငျ အနောကျကငျမရာ4လုံး ထညျ့ထားပါတယျ။ AI Scene Recognition, Chrome Boost, Super Nightscape နဲ့ Expert Mode တှေ ပါပါတယျ။ ဗီဒီယိုအတှကျ EIS ပါပါတယျ။ အနောကျဘကျကိုလညျး Gorilla Glass5နဲ့ ကာကှယျထားပါတယျ။ မကျြနှာပွငျအောကျ လကျဗှရောကိရိယာနဲ့ 30W VOOC 4.0 Fast Charging ပါပါတယျ။ မိနဈ 30 အတှငျးမှာ 67 ရာခိုငျနှုနျး အားဖွညျ့ပေးပါတယျ။ USB Type-C Port ပါပါတယျ။ Snapdragon 730G 8nm ပရိုဆကျဆာကို သုံးထားပွီး Adreno 618 GPU နဲ့ ထောကျပံ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ Android 9.0 (Pie) အခွပွေု ColorOS 6.0 ကို သုံးနိုငျမှာပါ။ နောကျဘကျမှာထညျ့ထားတဲ့ ကငျမရာ4လုံးကတော့ 64MP (Samsung GW1 sensor) ၊ 8MP 119° ultra-wide angle lens ၊ 2MP depth sensorနဲ့ 2MP (4cm macro ) တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရှဘေ့ကျအတှကျလညျး တာဝနျကပြှေနျလှနျးစှာ 32MP (f/2.0 aperture) ကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
(3). Redmi K20 (Mi 9T)
Realme X2 ဖုနျးလိုမြိုး နောကျထပျသုံးနိုငျတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးကို ရှာနတေယျဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီဖုနျးဟာ Redmi K20 ပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီစာရငျးထဲမှာ ထညျ့ပေးထားတဲ့ mid-range ဖုနျးတှထေဲမှာတော့ အတျောလေးစြေးနှုနျးနဲ့ လုပျဆောငျခကျြမြှတတဲ့ဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ hardware တညျဆောကျမှုပိုငျးအတှကျလညျး Snapdragon 730 နဲ့ 6GB RAM တှဲဘကျသုံးနိုငျမှာပါ။ ပွီးတော့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ 4000 mAh ဘကျထရီပါ။ Sony IMX582 sensor ဖွဈတဲ့ 48MP အဓိက သုံးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ telephoto sensor ထညျ့ထားတဲ့ ကငျမရာကလညျး အတျောမိုကျပါတယျ။ ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး notch-less display နဲ့အတူ pop-up ကငျမရာတှကေို သုံးထားပါတယျ။ သူ့မှာ အားနညျးခကျြလို့ ပွောစရာကတော့ Snapdragon 730 သုံးထားတာပဲ ရှိပါတယျ။ 6.39-inch (2340 × 1080 pixels) Full HD+ ကတော့ လကျရှိဖုနျးအမြားစုမှာ မွငျတှရေ့တဲ့ မကျြနှာပွငျ အရှယျအစား ပုံစံမြိုးပါ။ In-display fingerprint sensor သုံးနိုငျတာကလညျး လကျရှိအခြိနျမှာ သိပျအထူးခွားကွီး မဟုတျတော့ပါဘူး။
(4). Lenovo Z6
Lenovo Z6 စမတျဖုနျးဟာ လူကွိုကျသိပျမမြားတဲ့ ဖုနျးစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျပမေယျ့လညျး သငျ့ရဲ့ ငှကွေေးသုံးစှဲမှုပိုငျးအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ တုံ့ပွနျမှုကို ပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့မှာ စဉျးစားစရာအခကျြတှေ ရှိနပေါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ Lenovo ဟာ သူ့ရဲ့ software ထောကျပံ့မှုအတှကျ လူသိမမြားလှပါဘူး။ ဘာကွောငျ့မြား Best Mid-Range Smartphones of 2019 စာရငျးထဲမှာ ရောကျနရေပါသလဲ။ တိကတြဲ့အဖွတေော့ မဟုတျပမေယျ့ အထကျမှာဖျောပွထားခဲ့တဲ့ စမတျဖုနျ3းလုံးဖွဈတဲ့ Realme X2, Redmi Note 8 Pro နဲ့ Redmi K20 ဖုနျးတှဟော 180 grams ကြျောရှိပွီး 8.6 mm ထူပါတယျ။ Lenovo Z6 ကတော့ 159 grams သာရှိပွီး 7.7 mm သာ ထူပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ သူ့အနနေဲ့ ကိုငျဆောငျရတာ သကျတောငျ့သကျသာ အရှိဆုံးဖုနျးအနနေဲ့ ဝငျရောကျလာတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ နောကျထပျကောငျးတဲ့ အခကျြကတော့ 2x optical zoom နဲ့အတူ ကငျမရာ3လုံး တပျဆငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Snapdragon 730 chipset သုံးထားတဲ့ ဖုနျးတှထေဲမှာတော့ အတျောလေး စှမျးဆောငျခကျြနဲ့ စြေးနှုနျးသငျ့တဲ့ ဖုနျးအဖွဈ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ Lenovo Z6 မှာ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အံ့သွလောကျစရာ OLED panel ၊ HDR10 နဲ့ DCI P3 coverage လိုမြိုးတှနေဲ့ မွငျကှငျးစှမျးရညျတှကေို ရရှိမှာပါ။ 6.39-inch (2340 x 1080 pixels) FHD+ မှာ Octa Core (2.2GHz Dual + 1.8GHz Hexa) ဟာ မွနျနှုနျးအတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈပွီး Android 9.0 (Pie) with ZUI 11 သုံးရမှာပါ။ ကငျမရာပိုငျးမှာ ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ Sony IMX576 sensor ကို အဓိကကငျမရာ 24MP အတှကျ သုံးထားပွီး f/2.4 apertureနဲ့ 8MP Telephoto lens ၊ f/2.4 aperture နဲ့ 5MP depth of field lens တှေ ပေါငျးစပျသုံးနိုငျမှာပါ။ အရှဘေ့ကျမှာတော့ 16MP ကငျမရာကို တှရေ့မှာဖွဈပွီး In-display fingerprint sensor လညျး သုံးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
(5). Google Pixel 3a
စိတျလှုပျရှားစရာ အကောငျးဆုံးဖုနျးလို့ဆိုရမယျ့ Google ရဲ့ Pixel 3a ကလညျး အကောငျးဆုံး mid-range ဖုနျးတှထေဲမှာ ပါဝငျလကျြရှိပါတယျ။ ဒီဖုနျးဟာ ဒျေါလာ 400 ဝနျးကငျြဆိုပမေယျ့လညျး သုံးစှဲသူကွိုကျနှဈသကျမှုအရ mid-range စာရငျးထဲ ရောကျနတော ဖွဈပါတယျ။ Pixel 3a မှာ 5.6 လကျမ OLED Panel ထညျ့သှငျးထားပွီး အရညျအသှေးမှာ FHD+ (1080×2220)p ဖွဈပါတယျ။ Dragon Trail နဲ့ မကျြနှာပွငျကို ကာကှယျထားပါတယျ။ သူ့မှာ Snapdragon 670 Chipset မောငျးနှငျထားပါတယျ။ 4GB RAM, 64GB Storage မြား ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ micro SD Slot တော့ မပါပါဘူး။ ကငျမရာမြားအပိုငျးမှာ အနောကျဘကျမှာ 12.2MP Sony IMX363 Main Camera ပါပွီး OIS ပါပါတယျ။ စှမျးဆောငျခကျြအပိုငျးမှာတော့ သူ့ရဲ့ကငျမရာဟာ တနျဖိုးကွီး Pixel ရဲ့ စှမျးရညျကို သိပျမမှီပါဘူး။ အရှဘေ့ကျမှာ 8MP ကငျမရာ ထညျ့ထားပါတယျ။ Night Sight, Top Shot, Super Res Zoom, HDR+ လုပျဆောငျခကျြမြား ပါပါတယျ။ ဘကျထရီက 3000 mAh ဖွဈပွီး 18W Fast Charging ပါပါတယျ။ တနျဖိုးနညျးအောငျ ပလတျစတဈကိုယျထညျကို သုံးထားပါတယျ။
(6). Xiaomi Mi9SE
ပေါ့ပါးကဈြလဈြတဲ့ စမတျဖုနျးရှာနသေူတှအေတှကျ XiaomiMi9SE ဟာ စာရငျးထဲမှာ ရှိနပေါတယျ။ 2019 ဖုနျးတှဟော 6-inch+ display နဲ့အတူ ကွီးမားတဲ့ ဘကျထရီ၊ ကငျမရာမြိုးစုံနဲ့ ထှကျလာကွတာပါ။ Lenovo Z6 ဖုနျးဟာ အတျောလေးပေါ့ပါးပွီး ကဈြလဈြတဲ့ဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သူထကျပိုပွီး ပေါ့ပါးတဲ့ ဖုနျးကို ရှိနတေယျဆိုရငျတော့ Mi9SE ရှိနပေါတယျ။ ဘကျထရီစှမျးရညျနဲ့ display ကောငျးမှနျပွီး ကငျမရာပိုငျးမှာလညျး မခတောကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ Mi9SE ဟာ Snapdragon 712 Chipset အသဈသုံးထားတဲ့ ပထမဆုံးဖုနျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးဟာ Mi9ရဲ့ Compact ဗားရှငျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကငျမရာအတှကျ Sony IMX586 sensor သုံး 48-megapixel နဲ့ ကြောကငျမရာသုံးလုံးဖွဈပွီး မကျြနှာပွငျအောကျ လကျဗှရောဖတျစနဈလညျး ပါဝငျပါသေးတယျ။ Display က Mi9ထကျ အနညျးငယျသေးသှားပွီး 5.97 လကျမ သုံးထားပါတယျ။ Snapdragon 712 Chipset ကို 6GB RAM နဲ့ ထုတျပေးထားပွီး Storage ကိုတော့ 64GB နဲ့ 128GB တှေ ရှေးခယျြနိုငျမှာပါ။ Snapdragon 712 ဟာ Snapdragon 710 ထကျ CPU အနညျးငယျ ပိုမွနျလာတာကလှဲရငျ သိသိသာသာ ကှာခွားမှု မရှိပါဘူး။ ကြောကငျမရာသုံးလုံးမှာ 48MP main sensor, 123 ဒီဂရီ မွငျကှငျးကယျြ ရိုကျကူးနိုငျမယျ့ Super Wide 13MP sensor နဲ့ 8MP Telephoto sensor တို့ ပါရှိပါတယျ။ USB Type-C, NFC, IR Blaster စတာတှလေညျး Mi9နညျးတူ ပါရှိမှာပါ။ ဘကျထရီကတော့ 3070 mAh ဖွဈသှားပွီး 18W အား အမွနျသှငျးစနဈနဲ့ ဖွဈသှားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ 3.5 mm Audio Jack လညျး မပါလာတော့ပါဘူး။
(7). Moto G8 Plus
ဒီဖုနျးကတော့ စြေးသကျသာတဲ့ ပရီမီယမျဖုနျးလို့ သတျမှတျရပါလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ဓာတျပုံ၊ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ ဘကျထရီသကျတမျးအပိုငျးတှမှော အတျောလေးကောငျးတဲ့ဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကွညျ့ကောငျးပွီး ရှငျးလငျးတဲ့ အတှအေ့ကွုံကလညျး ဒီဖုနျးကို အကောငျးဆုံးဖုနျးဆိုတဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ယူဆောငျလာပေးပါတယျ။ သူ့မှာ 6.3 လကျမ Full HD+ Waterdrop Notch Display, 4GB RAM, Android9Pie တှေ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ Android 10 ကို အဆငျ့မွှငျ့ပေးမှာဖွဈပွီး2နှဈအထိ Security Patch တှေ ရမှာပါ။ အနောကျဘကျမှာ 48MP အပါအဝငျ ကငျမရာ3လုံး ထညျ့ထားပါတယျ။ အနောကျဘကျ M လိုဂိုလေးမှာ လကျဗှရောကိရိယာ တပျဆငျထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ပွနျပွောရမယျဆိုရငျ ဒီဖုနျးမှာ Full HD+ လို့ဆိုပမေယျ့ LCD screen ကိုသာ သငျ့အနနေဲ့ မွငျရမှာပါ။ ပွီးတော့ ပရိုဆကျဆာကလညျး Snapdragon 665 11nm ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ သိပျအဆငျ့မွငျ့တယျလို့တော့ သတျမှတျလို့ မရနိုငျပါဘူး။ ကငျမရာတှကေတော့ 48MP quad pixel မှာ LED flash တပျပေးထားပွီး 16MP 117-degree Ultra-wide Action ကငျမရာ ၊ 5MP depth sensing ကငျမရာတှကေို သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ 25MP quad pixel ကငျမရာကို ဖုနျးရဲ့ အရှဘေ့ကျ notch ထဲမှာ ထညျ့ပေးထားမှာပါ။ ကိုယျထညျက ပလပျစတဈနဲ့သာ လုပျထားတာဆိုပမေယျ့ Splash resistant (IPX2) လို စှမျးဆောငျခကျြကို တှရေ့မှာပါ။
(8). Honor 9X
ဒီဖုနျးကတော့ flagships တှမှောပါဝငျတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှကေို ထညျ့သှငျးပေးထားပွီး စြေးနှုနျးအနညျးငယျနဲ့ ထုတျပေးထားတဲ့ဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ notch-free display ဖွဈဖို့အတှကျ သူ့မှာ pop-up ကငျမရာကွီး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ LTPS IPS LCD မကျြနှာပွငျနဲ့ဖွဈပွီး 6.59 လကျမဆိုတာ သိပျထူးခွားတယျလို့ မဆိုနိုငျလောကျပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လကျရှိအခြိနျမှာ စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူအမြားစုဟာ အဲ့ဒီမွငျကှငျးအကယျြနဲ့ ဖုနျးတှကေို ထုတျနကွေလို့ပါဘဲ။ Android 9.0 (Pie) အခွပွေု EMUI 9.1 ကို သုံးနိုငျမှာပါ။ ပရိုဆကျဆာကတော့ HiSilicon Kirin 710F (12 nm) ဖွဈပါတယျ။ Mali-G51 MP4 ဂရပျဖဈပါ။ Motorized pop-up 16 MP ကငျမရာဟာ selfie ပုံတှကေို အကောငျးဆုံး ရိုကျကူးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ နောကျဘကျကငျမရာတှကေတော့ 48 MP ၊ 8 MP(ultrawide) နဲ့2MP (depth sensor) တို့ ဖွဈပါတယျ။ Li-Po 4000 mAh ဘကျထရီနဲ့ဖွဈပွီး 10W အားသှငျးစနဈသာ ထောကျပံ့ပေးပါတယျ။
Mid-range စမတ်ဖုန်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ budget ဖုန်းနဲ့ high-end ကြားထဲက လူတန်းစားအစုံသုံးနိုင်မယ့် စမတ်ဖုန်းလို့ တန်းမြင်ကြမှာပါ။ 2019 မှာဆိုရင် mid-range ဖုန်းတွေမှာ higher-end features တွေ ထည့်သွင်းလာကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သင့် Mid-Range စမတ်ဖုန်းကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီဖုန်းမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ premium features တွေကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Mid-Range ဖုန်းတွေကို သတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ပရိုဆက်ဆာ၊ ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီနဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ2လုံး၊3လုံး ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် high-end ဖုန်းတွေဟာ အလှမ်းဝေးလွန်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် high-end ဖုန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ပါဝင်တဲ့ Mid-Range စမတ်ဖုန်းတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ mid-range ဖုန်းသာဆိုတယ် အဲ့ဒီဖုန်းတွေမှာ flagship-grade fast charging, quad-cameras ကနေပြီးတော့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အသုံးဝင်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ 2019 အတွက် အကောင်းဆုံး Mid-Range စမတ်ဖုန်းတွေအကြောင်းကို ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Redmi Note model တွေကိုမှ ဒီစာရင်းထဲ မထည့်ထားရင် အကောင်းဆုံး Mid-Range စမတ်ဖုန်းဆိုတဲ့ စာရင်းဟာ ပြည့်စုံသွားမယ် မထင်ပါဘူး။ Redmi ရဲ့ Note ဖုန်းတွေဟာ အလယ်အလတ် စမတ်ဖုန်း ဝယ်ယူသူတွေထဲ ကြားထဲမှာ အလွန်ရေပန်းစားတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ကုမ္ပဏီဘက်က ပြောကြားချက်အရ Redmi Note 8 စီးရီးဖုန်းတွေကို3လအတွင်း အလုံးရေ 10 သန်းလောက် ရောင်းနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Redmi Note 8 Pro ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့မှာ စတိုင်ကျတဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ ဂိမ်းပိုင်းအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ ပရိုဆက်ဆာတို့ သုံးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ mid-range စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အတော်ဟန်ချက်ညီမျှတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ 64MP Camera ပါတဲ့ ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်ပြီး Samsung ရဲ့ ISOCELL Bright GW1 Sensor ဖြစ်ပြီး Quad-binning Pixel နည်းပညာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 6.53 လက်မ Full HD+ Display တပ်ဆင်ထားပြီး ဘေးဘောင်တွေက ပါးလွှာပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ4လုံးကို ဒေါင်လိုက် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ 64MP Main, 8MP Ultrawide, 2MP Depth နဲ့ 2MP Macro တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ AI Features နဲ့ Scene Recognition တွေပါတဲ့ 20MP Selfie ကင်မရာကို Notch မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဖုန်းဟာ MediaTekHelio G90T ပါတဲ့ ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ 18W Fast Charging ပါတဲ့ 4500 mAh Battery ထည့်ထားပါတယ်။ ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့အချိန်မှာ Chipset ကို အပူချိန်လျှော့ချပေးဖို့ Liquid Cooling Chamber 1 ခု ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ WiFi နဲ့ 4G2ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Mid-Range စမတ်ဖုန်းစာရင်းမှာ Redmi Note model တောင်ပါသေးရင် Realme X2 ကရော ပါလို့မရနိုင်ဘူးလား။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းထွက်နေတဲ့ Realme ကုမ္ပဏီရဲ့ Realme X2 ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 2019 ထွက်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ Realme X2 ဖုန်းဟာ အတော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ဈေးလည်း သက်သာသလို premium features အနည်းငယ်ကိုလည်း တွေ့ရမှာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို Gorilla Glass5နဲ့ ကာကွယ်ထားပါတယ်။ 64MP အပါအဝင် အနောက်ကင်မရာ4လုံး ထည့်ထားပါတယ်။ AI Scene Recognition, Chrome Boost, Super Nightscape နဲ့ Expert Mode တွေ ပါပါတယ်။ ဗီဒီယိုအတွက် EIS ပါပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကိုလည်း Gorilla Glass5နဲ့ ကာကွယ်ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာကိရိယာနဲ့ 30W VOOC 4.0 Fast Charging ပါပါတယ်။ မိနစ် 30 အတွင်းမှာ 67 ရာခိုင်နှုန်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ USB Type-C Port ပါပါတယ်။ Snapdragon 730G 8nm ပရိုဆက်ဆာကို သုံးထားပြီး Adreno 618 GPU နဲ့ ထောက်ပံ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Android 9.0 (Pie) အခြေပြု ColorOS 6.0 ကို သုံးနိုင်မှာပါ။ နောက်ဘက်မှာထည့်ထားတဲ့ ကင်မရာ4လုံးကတော့ 64MP (Samsung GW1 sensor) ၊ 8MP 119° ultra-wide angle lens ၊ 2MP depth sensorနဲ့ 2MP (4cm macro ) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်အတွက်လည်း တာဝန်ကျေပွန်လွန်းစွာ 32MP (f/2.0 aperture) ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Realme X2 ဖုန်းလိုမျိုး နောက်ထပ်သုံးနိုင်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီဖုန်းဟာ Redmi K20 ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ အတော်လေးဈေးနှုန်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျှတတဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ hardware တည်ဆောက်မှုပိုင်းအတွက်လည်း Snapdragon 730 နဲ့ 6GB RAM တွဲဘက်သုံးနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ 4000 mAh ဘက်ထရီပါ။ Sony IMX582 sensor ဖြစ်တဲ့ 48MP အဓိက သုံးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ telephoto sensor ထည့်ထားတဲ့ ကင်မရာကလည်း အတော်မိုက်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း notch-less display နဲ့အတူ pop-up ကင်မရာတွေကို သုံးထားပါတယ်။ သူ့မှာ အားနည်းချက်လို့ ပြောစရာကတော့ Snapdragon 730 သုံးထားတာပဲ ရှိပါတယ်။ 6.39-inch (2340 × 1080 pixels) Full HD+ ကတော့ လက်ရှိဖုန်းအများစုမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား ပုံစံမျိုးပါ။ In-display fingerprint sensor သုံးနိုင်တာကလည်း လက်ရှိအချိန်မှာ သိပ်အထူးခြားကြီး မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Lenovo Z6 စမတ်ဖုန်းဟာ လူကြိုက်သိပ်မများတဲ့ ဖုန်းစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ပေမယ့်လည်း သင့်ရဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပိုင်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ စဉ်းစားစရာအချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Lenovo ဟာ သူ့ရဲ့ software ထောက်ပံ့မှုအတွက် လူသိမများလှပါဘူး။ ဘာကြောင့်များ Best Mid-Range Smartphones of 2019 စာရင်းထဲမှာ ရောက်နေရပါသလဲ။ တိကျတဲ့အဖြေတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အထက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်3းလုံးဖြစ်တဲ့ Realme X2, Redmi Note 8 Pro နဲ့ Redmi K20 ဖုန်းတွေဟာ 180 grams ကျော်ရှိပြီး 8.6 mm ထူပါတယ်။ Lenovo Z6 ကတော့ 159 grams သာရှိပြီး 7.7 mm သာ ထူပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူ့အနေနဲ့ ကိုင်ဆောင်ရတာ သက်တောင့်သက်သာ အရှိဆုံးဖုန်းအနေနဲ့ ဝင်ရောက်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ 2x optical zoom နဲ့အတူ ကင်မရာ3လုံး တပ်ဆင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Snapdragon 730 chipset သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ အတော်လေး စွမ်းဆောင်ချက်နဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တဲ့ ဖုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ Lenovo Z6 မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အံ့သြလောက်စရာ OLED panel ၊ HDR10 နဲ့ DCI P3 coverage လိုမျိုးတွေနဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းရည်တွေကို ရရှိမှာပါ။ 6.39-inch (2340 x 1080 pixels) FHD+ မှာ Octa Core (2.2GHz Dual + 1.8GHz Hexa) ဟာ မြန်နှုန်းအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီး Android 9.0 (Pie) with ZUI 11 သုံးရမှာပါ။ ကင်မရာပိုင်းမှာ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Sony IMX576 sensor ကို အဓိကကင်မရာ 24MP အတွက် သုံးထားပြီး f/2.4 apertureနဲ့ 8MP Telephoto lens ၊ f/2.4 aperture နဲ့ 5MP depth of field lens တွေ ပေါင်းစပ်သုံးနိုင်မှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာတော့ 16MP ကင်မရာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး In-display fingerprint sensor လည်း သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးဖုန်းလို့ဆိုရမယ့် Google ရဲ့ Pixel 3a ကလည်း အကောင်းဆုံး mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာ ပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီဖုန်းဟာ ဒေါ်လာ 400 ဝန်းကျင်ဆိုပေမယ့်လည်း သုံးစွဲသူကြိုက်နှစ်သက်မှုအရ mid-range စာရင်းထဲ ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pixel 3a မှာ 5.6 လက်မ OLED Panel ထည့်သွင်းထားပြီး အရည်အသွေးမှာ FHD+ (1080×2220)p ဖြစ်ပါတယ်။ Dragon Trail နဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ကာကွယ်ထားပါတယ်။ သူ့မှာ Snapdragon 670 Chipset မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ 4GB RAM, 64GB Storage များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ micro SD Slot တော့ မပါပါဘူး။ ကင်မရာများအပိုင်းမှာ အနောက်ဘက်မှာ 12.2MP Sony IMX363 Main Camera ပါပြီး OIS ပါပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ချက်အပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ကင်မရာဟာ တန်ဖိုးကြီး Pixel ရဲ့ စွမ်းရည်ကို သိပ်မမှီပါဘူး။ အရှေ့ဘက်မှာ 8MP ကင်မရာ ထည့်ထားပါတယ်။ Night Sight, Top Shot, Super Res Zoom, HDR+ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါပါတယ်။ ဘက်ထရီက 3000 mAh ဖြစ်ပြီး 18W Fast Charging ပါပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းအောင် ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်ကို သုံးထားပါတယ်။
ပေါ့ပါးကျစ်လျစ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းရှာနေသူတွေအတွက် XiaomiMi9SE ဟာ စာရင်းထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ 2019 ဖုန်းတွေဟာ 6-inch+ display နဲ့အတူ ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီ၊ ကင်မရာမျိုးစုံနဲ့ ထွက်လာကြတာပါ။ Lenovo Z6 ဖုန်းဟာ အတော်လေးပေါ့ပါးပြီး ကျစ်လျစ်တဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူထက်ပိုပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ ဖုန်းကို ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ Mi9SE ရှိနေပါတယ်။ ဘက်ထရီစွမ်းရည်နဲ့ display ကောင်းမွန်ပြီး ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း မခေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mi9SE ဟာ Snapdragon 712 Chipset အသစ်သုံးထားတဲ့ ပထမဆုံးဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းဟာ Mi9ရဲ့ Compact ဗားရှင်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကင်မရာအတွက် Sony IMX586 sensor သုံး 48-megapixel နဲ့ ကျောကင်မရာသုံးလုံးဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာဖတ်စနစ်လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Display က Mi9ထက် အနည်းငယ်သေးသွားပြီး 5.97 လက်မ သုံးထားပါတယ်။ Snapdragon 712 Chipset ကို 6GB RAM နဲ့ ထုတ်ပေးထားပြီး Storage ကိုတော့ 64GB နဲ့ 128GB တွေ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ Snapdragon 712 ဟာ Snapdragon 710 ထက် CPU အနည်းငယ် ပိုမြန်လာတာကလွဲရင် သိသိသာသာ ကွာခြားမှု မရှိပါဘူး။ ကျောကင်မရာသုံးလုံးမှာ 48MP main sensor, 123 ဒီဂရီ မြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Super Wide 13MP sensor နဲ့ 8MP Telephoto sensor တို့ ပါရှိပါတယ်။ USB Type-C, NFC, IR Blaster စတာတွေလည်း Mi9နည်းတူ ပါရှိမှာပါ။ ဘက်ထရီကတော့ 3070 mAh ဖြစ်သွားပြီး 18W အား အမြန်သွင်းစနစ်နဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 3.5 mm Audio Jack လည်း မပါလာတော့ပါဘူး။
ဒီဖုန်းကတော့ ဈေးသက်သာတဲ့ ပရီမီယမ်ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဓာတ်ပုံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းအပိုင်းတွေမှာ အတော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကြည့်ကောင်းပြီး ရှင်းလင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံကလည်း ဒီဖုန်းကို အကောင်းဆုံးဖုန်းဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ သူ့မှာ 6.3 လက်မ Full HD+ Waterdrop Notch Display, 4GB RAM, Android9Pie တွေ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Android 10 ကို အဆင့်မြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး2နှစ်အထိ Security Patch တွေ ရမှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာ 48MP အပါအဝင် ကင်မရာ3လုံး ထည့်ထားပါတယ်။ အနောက်ဘက် M လိုဂိုလေးမှာ လက်ဗွေရာကိရိယာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းမှာ Full HD+ လို့ဆိုပေမယ့် LCD screen ကိုသာ သင့်အနေနဲ့ မြင်ရမှာပါ။ ပြီးတော့ ပရိုဆက်ဆာကလည်း Snapdragon 665 11nm ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်အဆင့်မြင့်တယ်လို့တော့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကင်မရာတွေကတော့ 48MP quad pixel မှာ LED flash တပ်ပေးထားပြီး 16MP 117-degree Ultra-wide Action ကင်မရာ ၊ 5MP depth sensing ကင်မရာတွေကို သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 25MP quad pixel ကင်မရာကို ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ဘက် notch ထဲမှာ ထည့်ပေးထားမှာပါ။ ကိုယ်ထည်က ပလပ်စတစ်နဲ့သာ လုပ်ထားတာဆိုပေမယ့် Splash resistant (IPX2) လို စွမ်းဆောင်ချက်ကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒီဖုန်းကတော့ flagships တွေမှာပါဝင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်နဲ့ ထုတ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ notch-free display ဖြစ်ဖို့အတွက် သူ့မှာ pop-up ကင်မရာကြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ LTPS IPS LCD မျက်နှာပြင်နဲ့ဖြစ်ပြီး 6.59 လက်မဆိုတာ သိပ်ထူးခြားတယ်လို့ မဆိုနိုင်လောက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအများစုဟာ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းအကျယ်နဲ့ ဖုန်းတွေကို ထုတ်နေကြလို့ပါဘဲ။ Android 9.0 (Pie) အခြေပြု EMUI 9.1 ကို သုံးနိုင်မှာပါ။ ပရိုဆက်ဆာကတော့ HiSilicon Kirin 710F (12 nm) ဖြစ်ပါတယ်။ Mali-G51 MP4 ဂရပ်ဖစ်ပါ။ Motorized pop-up 16 MP ကင်မရာဟာ selfie ပုံတွေကို အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဘက်ကင်မရာတွေကတော့ 48 MP ၊ 8 MP(ultrawide) နဲ့2MP (depth sensor) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Li-Po 4000 mAh ဘက်ထရီနဲ့ဖြစ်ပြီး 10W အားသွင်းစနစ်သာ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
Previous articleSamsung Galaxy M10 VS Samsung Galaxy M20
Next article2020 ခုနှဈတှငျ စှမျးဆောငျရညျညံ့တဲ့ မနျနဂြော 10 ရာခိုငျနှုနျးကို Huawei လြှော့ခမြညျ
Foldable Phones Are Back : These Are The Best Folding Phones...